एनसेलबाट पैसा नउठनुमा एनसेल भन्दा राजनीतिक दल र सत्तासिन सरकारहरु दोषी हुन् – रबी « Swadesh Nepal
एनसेलबाट पैसा नउठनुमा एनसेल भन्दा राजनीतिक दल र सत्तासिन सरकारहरु दोषी हुन् – रबी
आजको बिशेष – १. सामाजिक सञ्जालमार्फत वैदेशिक रोजगारीको नाममा लाखौं ठगी !
काठमाडौं । विराटनगरका आशिष काफ्लेले बैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप लागिदिने भन्दै १२ जना युवाहरुसँग ७० लाख रुपैयाँ उठाएर फरार भएका बिषयलाई यसअघिको कार्यक्रममा देखाएका थियौं । अहिले भने आशिष काफ्ले हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् । उनी मात्रै होइनन्, उनीबाट विदेश जाने सपनामा ठगिएका अन्य व्यक्ति पनि हाम्रो कार्यालयमा आएका छन् । ग्रिसमा रहेका काफ्लेले नेपालमा विभिन्न एजेन्टहरु बनाई फोन र सामाजिक सञ्जालबाट युरोपका देशहरु पोर्चुगल, जर्मनी, सिंगापुर, साइप्रस, ग्रिस लगाएतका देशमा पठाइदिने भन्दै आफन्त तथा एजेन्टहरुको खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाएका छन् ।
२. प्राधिकरणका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग क्षमा माग्दै घुस रकम फिर्ता गरे
झापा । नेपाल विद्युत प्राधिकरण झापास्थित अनारमनी वितरण केन्द्रका कर्मचारी दाताराम घिमिरेले सेवाग्राहीको मिटर जडान गर्ने वहानामा लिएको घुस रकम फिर्ता गरेका छन् । गत कार्याक्रममा सेवाग्राही कृष्ण अग्रवालको घरमा मिटर जडान गर्नका लागि उनले १२ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ घुस लिएका देखाएका थियौं । वितरण केन्द्रको चुहावट तथा अनियमितता नियन्त्रण प्रमुख समेत रहेको दातारामले २० हजारबाट बार्गेनिङ गर्दै १५ हजारमा सहमत भएका थिए ।
३. क्रुजमा काम लगाईदिने भन्दै करोडौं उठाएर सञ्चालक फरार !
काठमाडौं । काठमाडौंमा रहेको एप्रेन्टिस फर्म नामक कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरुले क्रुजको कामका लागि विदेश पठाईदिने भन्दै करोडौं उठाएर फरार भएको भन्दै पीडितहरु हाम्रो कार्यालय आएका छन् । पानी जहाजहरुमा काम लगाउने भन्दै भारत लगेर ट्रेनिङसमेत दिएको थियो, तर २८ माहिना बढी भइसक्यो न काम हुन्छ, न त पैसा नै फिर्ता हुन्छ । चर्काे व्याजमा लिएको पैसाको ब्याजनै पीडितहरुले एक लाख तिरिसके । न त उनीहरुलाई काम दिलाउने कुरा हुन्छ न त पैसा फिर्ता दिनेनै कुरा हुन्छ ।
४. आमा बुवाको सहारा बन्न मलेसियाको जेलबाट आए छोरा !
काठमाडौं । हामीले सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका–८ साङ्बारीकी ६१ बर्षीया कुमारी गुरुङको पीडा कार्यक्रममा देखाएका थियौं । राजेगारीको खोजीमा मलेसिया गएका कुमारी गुरुङका जेठा छोराले भाईलाई पनि मलेसिया नै बोलाए । ११ बर्ष अघि मलेसिया पुगेका रामबहादुर गुरुङ र उनका भाई नेत्रबहादुर गुरुङले मिलेर आमा बुबालाई पैसा पठाउँथे ।
-न्युज ट्वान्टी फोरबाट